‘दोस्रो चरणको निर्वाचन सबैभन्दा सफल’
Saturday, 8 Jul, 2017 10:12 AM
काठमाडौं, २४ असार । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भर्खरै सम्पन्न भएको दुई चरणका स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा निकै सुधार ल्याइने दृढता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवार पनि त्यतिकै सजग र सचेत रहनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन, मतदातामा देखिएको उत्साह, मतगणनामा भएको ढिलाइ, निर्वाचन आचारसंहिता पालनालगायत समसामयिक विषयमा प्रमुख आयुक्त डा. यादवसँग राससका समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो रहेको पाउनुभयो त ?
विभिन्न खाले सरोकारवालामध्ये निर्वाचनको प्रमुख साझेदार भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । निर्वाचनको कार्यक्रम अर्थात् मनोनयन शुरु भइसकेपछि उम्मेदवारको पनि भूमिका हुन्छ, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, पर्यवेक्षक, बुद्धिजीवी, पूर्वआयुक्त, अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदाय र सबैबाट सकारात्मक रुपमा राम्रो सहयोग प्राप्त भयो । सबैको सहयोगको फलस्वरुप विश्व समुदायमा नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, यो सबैको सहयोगबाट नै भएको हो ।